Apple manavao ny Final Cut Pro, iMovie, Compressor ary Motion amin'ny fotoana iray | Avy amin'ny mac aho
Androany dia namoaka fanavaozana vaovao i Apple Final Cut Pro, iMovie, Compressor ary Motion. Miaraka amin'izy rehetra izao dia azo alaina ao amin'ny Mac App Store. Na dia tsy mampiditra endri-javatra vaovao lehibe aza ireo fanavaozana, dia manamboatra bibikely sy manatsara ny fahamarinan'ny tsirairay amin'ireo programa izy rehetra. Mahaliana fa tonga amin'ny fotoana mitovy amin'ireo fanavaozana ireo ny fanavaozana. Raha manana ny efatra ianao, dia mila miaritra ny faharetanao hanavao azy ireo miaraka amin'izay. Fa na izany aza, ny kinova vaovao misy fanatsarana dia vaovao tsara foana.
Ilay mpanao gazety manokana momba ny haitao sy ny rafitra fiasan'ny Apple, Aaron Zollo dia namoaka tao amin'ny kaonty Twitter-ny izay manavao ny programa Final Cut Pro, iMovie, Compressor ary Motion tonga tamin'ny fotoana iray ihany izy ireo mankany amin'ny fivarotana Apple.
Apple dia namoaka fanavaozana ho an'ny Final Cut Pro, Motion, Compressor ary iMovie. Omaly io hoy izy, fa vao noraisiko androany. pic.twitter.com/TeVoukL9nG
Ny famintinana fanovana feno dia ahitana ny tsirairay amin'ireo fampiharana dia ireto manaraka ireto:
3 Compressor 4.5.2
4 Hetsika 5.5.1
Amboary ny olana sasany mety hitranga izany rehefa manafatra tetikasa avy amin'ny iMovie ho an'ny iOS, toy ny:
Mety hiova ny endritsoratra rehefa mampiasa ny lohatenin'ny Slide sy Chromat
Ny lohateny lava kokoa dia afaka mandeha amin'ny tsipika iray mankany amin'ny tsipika roa
Afaka esorina amin'ny sivana ny sivana
Tetikasa sasany mety tsy maninona
Mamaha olana iray izay ahafahan'ny fanovana anarana hetsika amin'ny fijerena ny "Hetsika rehetra" mety hiteraka an'io anarana io ihany aseho diso ho an'ny hetsika hafa
izany dia ahitana ny fanatsarana ny fitoniana sy ny fahamendrehana
Ny famerenana ity fanavaozana ity dia tena tsotra, mitovy amin'ny fanavaozana ihany: Fanatsarana ny fitoniana sy azo itokisana
Ao anatin'izany ny fikirana proxy HEVC nohavaozina ampiasaina amin'ny Final Cut Pro
nanampy Fanamboarana UI ho an'ny macOS Big Sur
izany dia ahitana ny fanatsarana ny fitoniana sy azo itokisana
Manampia a safidy fihenam-bidy vaovao mandeha ho azy ho Design kiheba
Ahitana rFanamboarana UI ho an'ny macOS Big Sur
Final Cut Pro€ 329,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Apple manavao ny Final Cut Pro, iMovie, Compressor ary Motion amin'ny fotoana iray
Ny Visual Studio an'i Microsoft izao dia mifanaraka amin'ny Apple Silicon